ရပ်စတော့ဗ် နာ ဒန်နူမြို့(ရုရှား: Росто́в-на-Дону́, tr. Rostov-na-Donu; IPA: [rɐˈstof nə dɐˈnu])သည် ရပ်စတော့ဗ် အော့ဗလတ်(Rostov Oblast)နှင့် တောင်ပိုင်းဖက်ဒရယ်ခရိုင်(Southern Federal District)တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုဗဟိုဖြစ်သည်။ အရှေ့ဥရောပကျောက်လွှာကြီး၏ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဒွန်းမြစ်ကမ်းပါးပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး အဇော့ပင်လယ်နှင့် ၃၂ ကီလိုမီတာ (၂၀ မိုင်) မျှသာ ကွာဝေးသည်။ မြို့၏ အနောက်တောင်ပိုင်း ဆင်ခြေဖုံးဒေသသည် ဒွန်းမြစ်ဝှမ်းနှင့် ထိစပ်၍ နေလေသည်။
↑ Official website of Rostov-on-Don. Biography of Zinaida Vasilyevna Neyarokhina, the Head of Rostov-on-Don (ရုရှား)
↑ Rostov Oblast Territorial Branch of the Federal State Statistics Service. Cities with Populations of 100,000 and Over (ရုရှား)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရပ်စတော့ဗ်_နာ_ဒန်နူမြို့&oldid=459474" မှ ရယူရန်
၇ မေ ၂၀၁၉၊ ၀၀:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ မေ ၂၀၁၉၊ ၀၀:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။